ARCHIVE, MUDRA MAMILA, SPECIAL, TAX » कुन व्यवसायमा कति कर लाग्छ ? जान्नुहोस् तपाईंले गर्ने व्यापार - व्यवसायमा लाग्ने करको रेट !
व्यवसायको कर योग्य आयमा निम्नानुसारले कर लाग्छ:
- बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य विमा व्यवसायमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ ।
- चुरोट, खैनी, बीदी, खाने सूर्ती, पानमसला, मदिरा, वियरको कारोबार गर्ने व्यवसायमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ ।
- पेट्रोलियम कारोबार ऐन २०४० बमोजिम पेट्रोलिय कार्य गर्ने निकायलाई ३० प्रतिशत कर लाग्छ ।
- बर्षभरी पूर्णरुपले विशेष उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेमा २० प्रतिशत कर लाग्छ ।
-सडक, पुल, टनेल, रोपवे, केबलकार वा आकासे पुल निर्माण गरी सन्चाल गरेमा २० प्रतिशत कर लाग्छ ।
-ट्रली बस् वा ट्राम संचालनसंचालन गरेमा :२० प्रतिशत कर त्र्नुपर्छा ।
-सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम स्थापना भएको ( कर छुट पाउने बाहेक0 ले २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छा ।
- निकासीबाट भएको आयमा :२० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
- पूर्वाधार सञ्चाल, निर्माण तथा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजना सञ्चालन गरेमा २० प्रतिशत
-विद्युत गृह निर्माण उत्पादन र प्रशारण गर्ने व्यवसाय ले २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छा। नेपालबाट विदेशी मुलुकमा पुगिने गरी प्रस्थान नहुने गरी जल यातायात हवाई यातायात वा दुर संचार सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दा व्यक्ति ले २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
- अन्य साधारण व्यवसायमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । तल उल्लेखित व्यवसाय बाहेक सबै साधारण व्यवसायमा पर्छ । उदाहरणका लागि तपाईंको साधारण व्यवसायमा १ लाख रुपैयाँ 'नेट प्रोफिट' देखियो भने तपाईंले २५ हजार आय कर तिर्नुपर्छ ।
(कर सचेतनाका लागि अर्थ सरोकार डटकम र ट्याक्सपर्ट को संयुक्त प्रयास)